Kunyarara kuri nani pane mutambo usina basa. - Anotungamira - Quotes Pedia
Zviitiko zvakasiyana zvinotishatisa zvakasiyana. Asi isu tese tinofanirwa kudzidza kuita nenzira yakafanira kumamiriro akasiyana kuitira kuti zvatinoita zvine zvazvinoreva uye usagadzira chero chinokuvadza kune chero munhu.
Dzimwe nguva, isu tinoshamisikawo kuita, uye tinosemeswa. Asi pane dzimwe nguva, tinonzwa kuti tine mafungiro akasimba uye tinofanira kutaura izvozvo asi tinogara tichifunga nezvezviripo. Aya mawonero anogona kungoshanda kwauri chete asi anogona kunge achikanganisa mumwe munhu.
Gara uchiyera mugumo weiyi mhinduro kana uchienzanisa newe uchidudzira zvaunofunga. Ehe, imira kupesana nekukanganisa chero kupi zvako asi gara uchitonga mamiriro ezvinhu usati waita. Kuita kwako hakufanirwe kukanganisa vamwe.
Rangarira kuti nguva dzose zviri nani kudzivirira mutambo usina basa nekuramba wakanyarara. Panogona kuve nedzimwe nguva dzakakodzera uye zviitiko zvinokwanisa kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Nekudaro, zvakakosha kuti tikwanise kutonga mamiriro acho uye toita maererano.
Dzimwe nguva kusaramba wakanyarara kunodhonhedzera iwe mumutambo usingatarisirwi iwe ungangodaro usina kuda. Naizvozvo, iwe paunoona mamiriro ezvinhu paine mafungiro akasiyana anopesana uye zano rako risingazounze shanduko yakakosha nekukurumidza, nyarara.
Kuramba wakanyarara hazvireve kuti uri kuramba kubva pane zvaunofanira kuita. Ita chinyararire nekuti zviito zvinotaura zvinonzwika kupfuura mazwi.
Ita basa rinodiwa iro rinenge riine chirevo uye richava nemhedzisiro uye nemhedzisiro mukugadzirisa nyaya iriko. Iyo ndiyo nzira ine zvibereko zvakanyanya yekugadzirisa mamiriro uye kwete kukwezvwa uchienda mune isina revo banter.
Iva Nani Quotes
Quotes Nezveisingakodzeri Mutambo
Quotes Pane Chinyararire Pfungwa
Zvisina kukodzera Quotes
Rimwe zuva mumwe munhu achakukumbundira zvakanyanya. Kuti zvidimbu zvako zvese zvakaputsika zvinonamatira pamwechete. - Asingazivikanwe
Izvo chaizvo zvakanaka kumirira kwenguva yakareba kupfuura kuroora zvisirizvo. Izvi zvinoreva kuti hatitombofaniri ...
Usambove wakabatikana zvakanyanya kusangana nemumwe munhu mutsva. - Asingazivikanwe
Kusangana nemumwe munhu mutsva inogara iri pfungwa yakanaka. Zvakaita sekuziva nyika nyowani, psychology nyowani, uye…
Sezvo iwe paunenge uchikura, iwe unonyatsoda kungotenderedzwa nevanhu vakanaka. Vanhu vakanakira iwe, vakanakira iwe, uye vakanakira mweya wako. - Asingazivikanwe
Sezvo iwe paunenge uchikwegura, iwe uchazongoda chete kugara wakakomberedzwa nevanhu vakanaka. Unozopedzisira wave…
Kune zvikonzero zvakawanda kwazvo zvekunakidzwa nehupenyu hwakanaka uhu. - Asingazivikanwe
Unorarama kamwe chete, nekudaro, zvakakosha kuti unzwisise kukosha kweumwe neumwe…